Ezimangelengele imithambo emifuleni, zembethe ihlathi eliluhlaza, Bashkiria njalo iyakwamukela izivakashi zayo. Ukushaya nabo ubuhle babo zemvelo, ubumsulwa acwebile futhi ezivulekile ububanzi, inikeza iholidi ongenakulibaleka. Ngokuvamile it is Rafting nokudoba. abadumile kakhulu izinhlobo ezinjalo lokuzijabulisa White River. Bashkiria, okuyinto inobungako ehlakazekile ngaphesheya komfula, sengathi isandla ongabonakali uqondisa zonke izindikimba kulomzimba esikhulu nesinamandla yamanzi.
White sifinyelela ubude mayelana nengxenye ayizinkulungwane amakhilomitha. Ngenxa owumthelela kwesokunxele River Kama, kuba ukuthi ingabe akusizi, futhi ingcebo imithombo, noma ukuhlanzeka amanzi alo. Piedmont Iremel - umthombo komfula. White, Bashkiria - lezi imiqondo eduze munye. Phela, leli evundile linqamula mfula kanye ubude balo lonke.
Abantu bendawo ukuyibiza Agidel, okuyinto elihunyushwe esuka ngolimi lwabo futhi lisho "ezimhlophe." It kweqa Ural, udidekile Maze of amawa futhi Amashalofu okubeka. White kungaqali ezahlukene ikakhulukazi kusukela neminye imifula Ural, ngaphandle exotic ukungabi oluphelele impucuko ukuheha izivakashi. Kusukela nasezingoxini ezijulile, amahlathi kanye emahlozini abayizithulu rocks engaqondakali sotkanny namathafa ayo.
Winter zilimaze konke lokhu ubuhle. Kusukela cishe phakathi Novemba ke embozwe uqweqwe crispy ice ehlala kwesinye isikhathi kuze kube ngo-Ephreli. On Agidel emfuleni imizi eyisishiyagalombili, kuhlanganise Ufa muzi. Famous for amanzi amadamu yayo futhi umfula White. Bashkiria lapha has izakhiwo ezinjalo ezimbili (eyakhelwe naphezu imibhikisho ngumphakathi) edolobheni Beloretsk futhi isiphetho Yumaguzin.
Ngakho kahle futhi ngokusankondlo ngokuthi izivakashi Isiqalo White, eyesithathu lokuqala ubude bayo. emaweni anezinguzunga zamadwala kanye licanca amagquma ukubiyela ubude balo lonke, ukudala isimo "umbuso Far Far Away." ruffles Agidel futhi amaza ohamba uba nezimpophoma ezincane angajulile, kodwa Onqobayo kubo pretty masinyane futhi behamba. Pebbles nesihlabathi strew wo kambe ezindaweni ezingasogwini. Ngokuvamile mfula ingxubevange ugodo, ngakho stragglers izingodo kanye Snag - kungcono izinto evamile salokhu emfuleni. Abanaso konakalisa ukubukeka kwayo, kunalokho, wenze "gqamisa" esithombeni, ngakho skilfully zaveza nemvelo.
Abathandi izinduku ukudoba kanye ukuphotha izinduku njalo bakhangwa White River. Bashkiria, ukudoba indlebe okumnandi esigxotsheni yiwona asondelene esihlobene futhi awukwazi ukucabanga lokhu "trio" ngaphandle okungenani eyodwa ingxenye. zasebukhosini - indawo lolu hlobo iholide ezingafanele. Fish Ukulunywa sibuthakathaka, kodwa landscape uyabukeka emehlweni. Labo siyakuthanda kuba ngokwemvelo, khetha kule ndawo. Labo abafuna ujabulele ebhakedeni wabanjwa perch egcwele, ukuya kwezinye.
A ndawo idume ngokudla abadobi - ingxenye maphakathi Agideli. Ezulazulayo ngokusebenzisa ezintabeni Urals Southern, uphendukela ngaseningizimu-ntshonalanga. Kodwa, yakhulula ekugqilazweni entabeni, evele ageleza enyakatho. Waklama namawashi ahlekisayo futhi umfula ezingezwakali Belaya. Bashkiria kufanele ubona indodakazi yakhe ibe yisijaka oba abamnene futhi iyabathanda, uma uya ku-ke ngokuhle kanye nokufunda ikhono ukuzibamba.
Abadobi ifa leli khono, ngakho kuphephile ukuya kule sayithi Agideli osuka Meleuz emzini abantu abangaphezu kwesigidi - Ufa. Khona-ke ukubamba inhlanzi kwi donk, fly-ukudoba ngenduku kanye nenduku yokudoba nge iflothi. Kodwa indlela ethandwa kakhulu ukudoba - ngokuqinisekile wiring nge esikhwameni. Ukusebenzisa lezi amasu, ungathola omuhle catch ide, bream nesiliva bream.
Beka lapha akukhona ngempela ebabazekayo kakhulu, kodwa ithule cwaka futhi inokuthula. Nomaphi ubona ngamaqembu amancane, lapho ungakwazi gcwalisa imikhiqizo. On the lomfula, ungakwazi ngokuvamile ubone lonke itende idolobha, okuyinto ihlukaniswe hhayi abadobi kuphela, kodwa futhi izivakashi abavamile ukuthi beze lapha ukuze baphumule uthuli futhi umsindo amadolobha amakhulu.
Kusukela Ufa emlonyeni
Lena ingxenye yesithathu nezokugcina, usike White. Kuleli sayithi kuba ngisho ebanzi futhi ajulile. Ukuwela umuzi omkhulu, lo mfula omkhulu ngokubabazekayo sengathi nguye kanye senkosikazi waleli dolobhakazi lasendulo. Kuzo zombili izinhlangothi yezinhlamvu labadobi kungenziwa imi ngezinduku ukudoba nento buthule bexoxa. Abaningi kuphela eyodwa ekuseni kungaba donsa amakhilogremu angaphezu kwayisihlanu, ngokuvamile Podust futhi Ides.
On isayithi ezikude kukhona whirlpools ezijulile futhi izimbobo, okuyinto kangaka uyakuthanda ukufihla eyikati. Uma uzoba umsebenzi wokufuna ngqo kubo, akunakwenzeka ukuba catch inyamazane. Icala okungekuhle. Kodwa ngezinye izikhathi zikhona labo lucky abaphethe hhayi kuphela ukubamba eyikati futhi sezithombe umdondoshiya. Kwesinye isenzakalo, okwamanje elilodwa leduna badoba 35 amakhilogramu ngabanye, ubude - kanye amamitha nengxenye.
Kuleli sayithi kukhona izikebhe, izikebhe kanye nokungcebeleka nge ababethi bemitshingo nesixuku zezivakashi. Kodwa izinhlanzi asesabi ke futhi ukuluma ngokuzithandela. Ophayo Catch White River. Bashkiria, ukuphumula elinikeza hhayi kuphela ukudoba, futhi ejabulisa izivakashi Alloys ezahlukene kanye nezinye ukuzijabulisa.
Agidel - yindawo enhle kakhulu iholidi ezinjalo. Wide futhi fast, ngezinye izikhathi esikhohlisayo nokuntula a amatshe ongaqondakali, edonsela abathandi lo mdlalo. Isikhathi ekahle kuye kusukela ngo-May kuya ku-September. Tours kungenziwa kukhethwe ukuba ivumelane yonke akuthandayo, kusukela ezinsukwini ezintathu kuya emasontweni amabili. Kukhona futhi ezinye izinketho ochwepheshe nakho abalandeli ngisho "green" zifiki.
Ngokwesibonelo, ukuvakasha ngokuthi "Umoya". ingxubevange besikhatsi - Sekwedlule 6 izinsuku. Izivakashi ngosuku belwa isici amanzi, zokunqoba Rapids, futhi ngesikhathi sokulala ubusuku ematendeni ogwini. Umfundisi usitshela ngokuningiliziwe ngezimo yalolu hlobo lokuzijabulisa, udlala indima ingqapheli kanye nomphathi. Izivakashi yonke imisebenzi eziyisisekelo eyenziwa ngokwakho: bahloma amatende, bamisa ukulungiselela ukudla Kazanka, ukugwedla Izigwedlo. Kuwufanele injabulo ruble abangaba yinkulungwane ngosuku.
Yazi amandla izakhi kanye ukukhululwa kwe-adrenaline - amakhono afana unika zonke lisha White River. Bashkiria - iyizwe acwebile ethule, amahlathi eco-friendly namachibi, ngakho ukuchitha iholide lakho lapha yilowo nalowo kini okungenani kanye empilweni.
Believe me, lonke - akusiwona konke olumangazayo, edonsela emfuleni. White - omunye misele ebaluleke kakhulu Bashkiria. Ngokusho zazitholakala omkhulu isitsha athwele amafutha, izinto zakhe ukwakhiwa futhi amatshe-isihlabathi ingxube. Kukhona eyenziwa Cruises, umzila osuka ingxenye European Russian Federation kuze Ufa.
White futhi yobufakazi izenzakalo eziningi zomlando, ikakhulukazi lapho kuba nokuvukela ethandwa. Emelyan Pugachev futhi Salavat Yulaev wanyathelwa ngasogwini lwalo wageza emanzini cool. By endleleni, lapho igatsha White we Kama uzophawula umthunzi ezahlukene emfuleni. Agidel ukuxegiselwa kakhulu, kubonakala sengathi umfula ezichithekile eningi ubisi.
White River, Bashkiria ... ifotho yezindawo hit ezimibalabala landscape. Zibizwa ngokuthi sombuso Urals by kwesokudla. Fika lapha okungenani izinsuku ezimbalwa, ozokuthanda kule ndawo ngayo yonke inhliziyo yami nomphefumulo wami. Izimangaliso engcono amazing of bomhlaba bebuthana lapha ogwini Agidel. Deep emihumeni emnyama, amawa, emi onqenqemeni ngalo ekuphelelweni umuzwa ngokoqobo, futhi zihlanganisa amahlathi emvula aminyene, like puzzle, ukudala isithombe ezithakazelisayo futhi kujabulise. Qiniseka ukuthi beze lapha emoyeni wokungenisa izihambi lezi zindawo ezikude futhi ebukekayo.
Umzila Anapa - Simferopol: zokunqoba
Carry izimpahla edolobheni noma Indlela Yokusiza Novoselov
Amaphrotheni Shake I-kwemisipha ukukhula - okungcono usizo nomsubathi.